अष्ट्रेलिया आइयो, अब के काम गर्ने त ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २२ आश्विन २०७४, आईतवार ०३:२९ |
अष्ट्रेलिया जानुको प्रमुख उद्देश्य गुणस्तरीय उच्च शिक्षा हासिल गर्नु हो । तर शिक्षासँगै काम गर्ने र अध्ययनका लागि सहयोग होस भन्ने हेतुले केही अर्थोपार्जनका लागि लाग्नु पनि स्वभाविक हो । यस्तोमा कस्तो काम पाइन्छ त अष्ट्रेलियामा ? यो जान्नु जरुरी छ ।
सबैभन्दा पहिले क्लिनिङ अर्थात सरसफाई । सुन्दा सजिलो लाग्ने तर काम गर्दा भने अप्ठ्यारो हुने यो काम नेपालबाट अष्ट्रेलिया जानेका लागि पहिलो काम बन्ने गरेको छ । यस्तो काममा पैसा पनि हुन्छ । पब क्लिनिङ, अफिस क्लिनिङलगायतमा सरसफाइको काम सहजै पाइन्छ तर ठूलो मिहेनत भने गर्नुपर्छ ।
नेपालमा जस्तो कुनै पनि हालतमा बेरोजागर भने बस्नु पर्दैन कुनै न कुनै समय कुनै न कुनै काम भने अवश्य पाइन्छ । क्लिनिङ पछाडि रेष्टुराँमा पनि काम पाउन सकिन्छ । कुकदेखि रेष्टुराँ सहयोगीका रुपमा थुप्रै कामहरु पाइन्छन् ।
त्यसबाहेक असिस्टेन्ट इन नर्सिङ एन आईका रुपमा पनि काम गर्न सकिन्छ । यसका लागि निश्चित रकम तिरेर तालिम लिनु पर्छ । तालिम पश्चात काम पाइन्छ । यो काम भनेको वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्ने हो ।
Previousआफ्नो पपकर्न चोरेर खाने बालिकाप्रति बेलायती राजकुमार ह्यारीको प्रतिक्रिया, भिडियो भाइरल
Nextविश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको तिलिचो ताल भ्रमण गर्ने बढे
अष्ट्रेलियामा पीआर पाउने पाँच सजिला विषयहरु
२५ फाल्गुन २०७३, बुधबार ०१:४५
अष्ट्रेलियामा स्टुडेन्ट भिसामा आउनेहरु पनि सफल व्यवसायी बन्न सक्छन्
२५ कार्तिक २०७४, शनिबार ०४:०४